Guqula OST ukuya kwi-PST
Ikhaya iimveliso DataNumen Exchange Recovery Guqula OST Ifayile kwifayile yePST
usebenzisa DataNumen Exchange Recovery Ukuguqula OST Ifayile kwifayile yePST
4.90 / 5 (ukusuka kwiivoti ezili-1,521)
Kuba iMicrosoft Outlook ayinakuvula ifolda engasebenziyoOSTifayile ngqo, xa ufuna ukufikelela kwidatha kwi OST ifayile, kufuneka uyiguqulele kwifayile ye-PST enokubonwa yi-Outlook.
Ezinye zeemeko eziqhelekileyo xa ufuna ukuguqula OST ukuya kwi-PST zezi:
Ibhokisi yeposi yokuTshintshana edibana ne OST ifayile ayifumaneki ngenxa yezizathu ezithile kunye OST ifayile yinkedama. Kuya kufuneka uphinde ufumane idatha kuyo.
The OST ifayile yonakele okanye yonakele. Ufuna ukufumana kwakhona idatha kuyo.
Ufuna ukufumana idatha ekhoyo kwindawo yasekuhlaleni OST ifayile.
kunye DataNumen Exchange Recovery, unokuguqula OST ifayile kwifayile yePST ngokulula nangokufanelekileyo.
Ukuguqula OST kwifayile ye-PST, nceda wenze oku kulandelayo:
Phawula: Ngaphambi kokuguqula i OST ifayile kwifayile ye-PST nge DataNumen Exchange RecoveryNceda uvale iMicrosoft Outlook kunye nezinye iinkqubo ezinokufikelela okanye ziguqule ifayile ye OST ifayile.
Ngokuzenzekela, DataNumen Exchange Recovery iya kuguqula OST fayile kwifayile entsha ye-PST ebizwa ngokuba yi-xxxx_recovered.pst, apho i-xxxx ligama lomthombo OST ifayile. Umzekelo, kumthombo OST Umthombo wefayile.ost, Ifayile yePST eguqulweyo iya kuba nguSource_recovered.pst. Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
Ungafaka igama lefayile yePST ngokuthe ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kunye nokukhetha igama lefayile ye-PST.
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen Exchange Recovery Ndiza start ukuskena nokuguqula idatha kumthombo OST ifayile kwindawo ekuya kuyo ifayile ye-PST. Inkqubela phambili yebha
Emva kwenkqubo yokuguqula, ukuba idatha iguqulwe ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yomyalezo ngolu hlobo:
Ngoku unokuvula ifayile ye-PST eguqulweyo ngeMicrosoft Outlook kunye nokufikelela kwidatha ekuyo.
Guqula OST Ifayile kwifayile yePST